+ 15 Iitobhu zebhalbhu zokukhanya, izimvo kunye noyilo loyilo | Ukuzoba
Iimpawu ze-bulb zokukhanya, ingqokelela yoyilo kunye nemibono
UFernando Prada | | Izinto kunye neeTattoos zezinto
Los iiTatoo zebhalbhu ezikhanyayo Bafezekile abantu bokuyila ekufuneka babeke iingcinga zabo kuvavanyo mihla le xa befuna izisombululo kwimiceli mngeni eyahlukeneyo kunye / okanye iingxaki. Unomdla kwaye uyabetha, nantsi indlela abayiyo uhlobo lweetattoos ukuba kumaxesha akutshanje iya isanda ekuthandeni kwaye abantu abaninzi baya bekhetha ukuphawula ulusu lwabo ngebhalbhu yesibane esinganyanisekanga.
Kodwa ayisebenzi nje ukumela ubuchule bomntu. Iimpawu zeebhalbhu zokukhanya nazo inokuba nentsingiselo enzulu isihlobo esingasekhoyo esiya kuhlala sikukukhanya kwethu, umhlobo osikhokelayo kwelona xesha limnyama okanye umbono wokuncamathela ekufezekiseni iinjongo zethu.
1 Zithetha ntoni ii-bulb tattoos?
2 Uyilo lwebhalbhu yebhalbhu yokukhanya yahluka kakhulu kwaye inemibala
3 Iifoto zeTattoos zeBhalbhu yokuKhanya
Zithetha ntoni ii-bulb tattoos?
Asinakho ukulibala ukuba ii-tbb zebhalbhu zesibane zihlala zinxulumene nabantu abayilayo kakhulu okanye abazicingelayo abazinikeleyo ekwenzeni umsebenzi okanye iiprojekthi apho ukucinga, ubuchule kunye nokwenza okuthile kungumyalelo wosuku kwaye befanele ukulufuna phi olo luvo, okanye kunokuba, yenza khanyisa ibhalbhu yokukhanyisa ukusombulula iinkxwaleko abazinikwa mihla le.
Iimpawu zebhalbhu zokukhanya zavela ngombono wokumela oko sele kuxoxiwe ngentla apha kodwa ngoku, okwangoku Bathabathe intsingiselo ebanzi kunye nodumo olugqithisileyo (Njenge iiTattoos ezingapheliyo okanye iintsiba) phantse ukuba akunakulindeleka ukuba sibe nelungelo elinentsingiselo enye kodwa sinokuzama.
Intsingiselo eqhelekileyo exhaphake ukunikwa iitotos zebhalbhu zokukhanya yile Jolise, oko kukuthi, imele ukugxila kwimbono, injongo okanye umceli mngeni kwinxalenye yomntu okhokelela kuyo ukuze ayigcine engqondweni. Kufana nenkuthazo ekukhuthaza ukuba uqhubeke nangona kukho ubunzima obusendleleni yakho, ethi, amaxesha ngamaxesha, ekungekho lula ukuyoyisa kwaye ifune "ukubanjwa kokukhanya" okanye ubuchule bokuqhubela phambili kwindlela yethu. Iimpawu ze-bulb zokukhanya zihlala zihlala, nangona zincinci, zinxulunyaniswa nokuqiqa ngokuthe ngqo okanye izimvo eziqhelekileyo ngaphandle kwebhokisi yesanti ziingcinga zoyilo kakhulu okanye zoqobo zokusombulula ingxaki.
Enye intsingiselo exhaphakileyo kolu hlobo lweetattoo kukuzinikezela okanye ukuzingca ngento ethile (umsebenzi, umbono, ubugcisa) okanye umntu okoko ngaphakathi kwebhalbhu, kukho uyilo apho ubona umntu okanye into emele ikratshi okanye ukoneliseka ngumntu onxibileyo. itattoo.
Okanye neyakho uhlobo ibonakalisiwe kwi iiTatoo zebhalbhu ezikhanyayo, Olu luvo lokugqibela lucace ngakumbi kodwa kubazobi be tattoo besiphanda kwaye kukho uyilo oluninzi oluxubusha ezi zimvo zimbini, ekubonakala ukuba, azinanto inye kodwa ukuba umculi olungileyo we tattoo unokudibanisa kwinto entle, enomdla kwaye eyahlukileyo iqhekeza.
Ezi zezinye zeentsingiselo ezixhaphakileyo zinikwa olu hlobo lweetattoos, kuyacaca ukuba, nganye nganye, iyinika ukubanjwa kwayo ukuze imele into eyenzela yona okanye eyomhlaba.
Kule nqaku senze ngokupheleleyo kwaye sahluka Ukuqokelelwa kwebhalbhu yebhalbhu ekhanyayo Oku kuyakuvumela ukuba uthathe izimvo zetattoo yakho xa ucinga ukuba oku kunokwenzeka. Inyani yile yokuba ngaphaya kokufuna ukubonisa ubuntu bethu bokuyila, ii-tatoos zebhalbhu zokukhanya zinokudityaniswa kunye nezinye izinto ukuguqula intsingiselo yazo okanye ukuhambisa umyalezo othile.
Jonga nje kwi ibhalbhu yesikhanyiso segalari ukufumana uyilo olwahlukeneyo nolwahlukileyo. Siyabona ukuba kukho uyilo olunokwenyani noluchanekileyo lwetattoo kweyona nto inzima apho unokubona khona nokujika okunikezelwa yifilament ngaphakathi kwebhalbhu, nkqu noyilo apho sifumana khona abantu (nokuba kukwimo yesilhouette okanye umzimba uphela) Ngokuntsokotha oku kubandakanya ukuya kubulula bohlobo lwebhalbhu emoticon njengale sinayo kwiselfowuni. Kukho izinto ezimnyama zoyilo ezinje ngokakayi kunye nebhalbhu ephuma kukhakhayi okanye iliso kunye nezinye apho sifumana khona iliso ngaphakathi kwebhalbhu.
Uyilo lwebhalbhu yebhalbhu yokukhanya yahluka kakhulu kwaye inemibala
Njengoko besenditshilo ngaphambili, nganye inika intsingiselo ekufutshane nezimvo zazo kwaye zinokwahluka njengamaqhekeza ekhephu ekwindla, kuya kufuneka ufumane uyilo oluthandayo okanye olumele kakhulu.
Kodwa kwi-tattoo sinceda kakhulu abanye ke siyile igalari yoyilo ukuze ufumane ukuphefumlelwa okuncinci kwaye ke ukwazi ukumakisha ulusu lwakho uyilo olwahlukileyo nolukhethekileyo kuwe.
Yintoni isizathu sokwenza umvambo webhalbhu yesibane kunye nomntu ongaphakathi kuyo? Kule meko, umbono wokudlulisa umyalezo wokuba umntu othile umele ukukhanya ngaphakathi kwethu udlalwa ngawo. Nokuba lilungu losapho, iqabane okanye umhlobo. Kwaye kuwe, ucinga ntoni ngezi Iitato? Sithanda ukwazi uluvo lwakho ngezimvo zeli nqaku.
Iifoto zeTattoos zeBhalbhu yokuKhanya
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Izinto kunye neeTattoos zezinto » Iimpawu ze-bulb zokukhanya, ingqokelela yoyilo kunye nemibono
Iiattoos, ingqokelela yoyilo kunye nemizekelo
Iingelosi kunye needemon iiTattoos